ကမာရွတ်ရှိရောင်းရန်ကွန်ဒိုများ | iMyanmarHouse.com
ကမာရှတျမွို့နယျ Diamond Condo ရောငျးမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8191466 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09-5121372 / 09-965121372
Nan Taw Thit Real Estate ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8191141 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8189392 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
လှညျးတနျး မွရိပျကှနျဒို ရောငျးမညျငှားမညျ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8187856 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မြနန္ဒာလမ်းတွင် (1440sqft)အကျယ်ရှိအခန်း အမြန်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8186714 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
န၀ရတ်ကွန်ဒိုတွင် (1200sqft) အကျယ်ရှိအခန်း အမြန်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8186691 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8186217 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
အာတီးယားလမ်းကွန်ဒိုတွင် (1750 sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8185157 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဘုရငျနောငျတာဝါ 1450sqft (1500သိနျး)ရောငျးမညျ။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8184949 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-8184091 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
09421107446. 09444434772. 0943082052